Wasiirka warfaafinta oo howl xukuumaddu qabatay ka reebay warbixintiisa!! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka warfaafinta oo howl xukuumaddu qabatay ka reebay warbixintiisa!!
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustaf Cali Dhuxulow oo looga bartay inuu tododobaadkiiba mar warbaahinta sii mariyo horumarka xukuumadda Soomaaliya sameysay ayaa warbixintii uu manta soo saaray iska indha-tiray qeyb ka mid ah howlaha todobaadkii tegay dowladda Soomaaliya qabatay.
23-kii June 2014, waxaa magaalada Muqdisho heshiis ku kala saxiixaday wakiillo ka kala socday labo qolo kala watay maamulka Koonfur Galbeed ee 6-da gobol iyo maamulka Koonfur Galbeed ee 3-da gobol.
Heshiiskaas waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, Raysulwasaare C/weli Sheekh Axmed, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wakiilada beesha caalamka u jooga Muqdisho.
Heshiiska uu warbaahinta u aqriyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliyda, Ridwaan Xaaji C/weli, kana koobnaa 11 qodob ayaa u qornaa sidan:
Hadaba sida ka muuqata qodobadan, heshiiskaan waxaa kaalin weyn ku leh xukuumadda Soomaaliya, waxeyna xukuumadda dusha u ridatay mas’uuliyadda ah meel-marinta iyo taabbo-gelinta heshiiskan, hase ahaatee wasiirka warfaafinta ayaa meel iska dhigay howshaas xukuumadda, madaxtoooyada iyo gudoonka baarlamaanka wada qabteen.
Sida ka muuqata warbixinta todobaadle ah ee manta soo saaray wuxuu kazoo bilaabay 22-kii June, wuxuuna ka tegay heshiiska oo dhacay 23-kii June.
Wasiirka Warfaafinta ayaa xooga saaray ka hadalka shirkad diyaaradded, isagoo iska indha-tiray heshiis lagu kala qaboojiyey dhinacyo muranka u dhaxeeyey keenay rabshado dhibaato ka geystay Baydhabo.
Waxaa laga yaabaa in wasiirka warfaafintu uu qodobkaas warbixintiisa uga reebay cadaadis odayaasha Hawiye saareen xubnaha beeshaas ugu jira xukuumadda iyo baarlamaanka.
Odayaal sheegay iney ku hadlayaan magaca Hawiye ayaa warbaahinta horay uga sheegay iney diidan yihiin in gobolka Shabeellaha Hoose la midoobo Baay iyo Bakool, waxeyna warbaahinta ka sheegeen iney wasiirada iyo xildhibaanada iyaga kazoo jeeda ugu baaqeen ineysan shaqada dowladda xaadirin.